Japana: Nankaiza daholo ny dibera? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 19:23 GMT
Vakio amin'ny teny हिन्दी, Deutsch, Español, বাংলা, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Nankaiza ny dibera ? – hoy ireo Japone mpanjifa mitaraina rehefa avy nikaroka hatraiza hatraiza ilay vokatra avy amin’ny ronono. Niteraka tsy fahampiana goavan’ny dibera tao Japana ny fitotonganan’ny famokarana ronono velona, ary vao mainka nohasarotin’ny fiakaran’ny vidin'ny voa sy ny fiovan’ny rafitra eran-tany amin’ny fanjifàna vokatra avy amin’ny ronono izany. Andro maromaro izay no tsy tonga nameno ny talantalan'ny vokatra avy amin’ny ronono anatin'ireo tranombarotra manerana ny firenena ny mpamatsy dibera, ary namoaka soratra naneho fialan-tsiny noho ny tsy fisian’izany ireo fivarotana.
Talantalana babangoana misy soratra manazava fa tsy fantatr’ireo tomponandraikitra ny fotoana hahatongavan'ireo famatsiana dibera manaraka.
Raha maro ireo bilaogera mitaraina amin’ilay tsy fisianà dibera sy ny olana aterak’izany, ilay bilaogera Bebe Kobo, izay manana orinasa kely mpamokatra ronono tantanan’ny fianakaviany kosa, manome ny fijeriny amin’ireo olana mianjady amin’ny mpamokatra ronono, olana izay niteraka ity tsy fahampianà dibera ity.
Araka ilay efa voatatitra tamin'ny Fahitalavitra sy ny gazety, tena zava-doza ity tsy fisian’ny dibera ity.
Araka ny efa voalaza dia tsy fahampian’ny ronono hono no antony mahatonga ity tsy fisiana ity.
Tsy niova ny fanjifana ronono hatramin’izay, ary nofongarina ny ronono tao Hokkaido tamin'ny 2006. Nisy ombivavy marobe koa novonoina.
Tsy afaka niala tamin’ny ronono vovony voasodika izy ireo talohan’izay, ka voatery nividy izany tamin’ny kitapo lehibe toy ny lasakanà simenitra ny mpamokatra ronono, ka nalaina tamin'ny karamany ny vidiny tamin’ny fiarahamiasa. Ankoatra izany rehefa tonga ny faran’ny taona, noterena hividy dibera be dia be indray izy ireo ary vola nesorina tamin’ny karamany no nividianana izany (izay toa tsy mampino ankehitriny).
Ny tsy fiovan’ny fanjifàna ronono – misy antony vitsivitsy mahatonga izany. Misy karazany maro ny zava-pisotro maivana. Mihena ny fanjifana ny ronono any an-tsekoly noho ny hakelin’ny taha-piterahana. Misy olona tsy mazaka, ary misy ireo olona sasany izay tsy hoe tsy mahazaka akory fa manaratsy ny ronono … nahita bilaogy mahatsiravina izay aho, noharatsiny ny ronono ary nilaza izy ireo fa nanantena ny tsy hisian’ny mpamokatra intsony.
Misy boky iray izay tonga manokana ato an-tsaiko, nosoratan'i Shintani Hiromitsu mitondra ny lohateny hoe “Ny fomba fiainana tsy mankarary” avy amin'ny Sunmark Publishing. Nalaza be izy io.
Niainga tamin'ny fomba fijery hoe “ratsy ny ronono” no nanoratana ity boky ity, tsy ny mpamokatra ronono ihany no tezitra tamin’izy ity fa ireo akademisiana mora tohina ihany koa, ary nanimba ny fahitan'ny olona ny ronono izay efa tsy dia be mpanjifa intsony izy ity.
Miantraika mivantana amin’ireo mpanjifa ny voka-dratsin'ny famonoana faobe ny ombivavy. Iray amin'ireo vokatra ireo ny tsy fahampian’ny dibera.
Mila 2 taona mahery izay vao afaka mamokatra ronono ny zanak'omby iray.
Tsy afaka manohitra ny lalàna voajanahary ianao.
Tsy vokatra simika ny vokatra avy amin'ny ronono. Mitranga matetika ny zavatra toy izao tsy fisian’ny dibera izao raha tsy mandeha ny rafitra fiompiana ara-pahasalamana ny ombivavy.
Mangataka ny fahatakaranao amin’ny fahatsoram-po aho ry mpanjifa.
Mitanisa ireo antony lehibe mahatonga ny tsy fisian'ny dibera amin'izao fotoana izao ilay bilaogera anatinà lahatsoratra iray hafa navoaka taty aoriana.
1. Tsy iantohana amin’ny famatsiambola intsony ny fanondranana ny vokatra avy amin’ny ronono any amin'ny firenena eoropeana (toa an'i Frantsa), ary efa natokana ho an’ny fanjifàna anatiny ny dibera izay tokony nalefa tany Japana sy ireo firenena hafa. Nalefa tany amin’ny toerana hafa ihany koa ankoatra izay ny dibera tokony nalefa tany amin’ny firenena nahitana fiakaran'ny fari-piainan'ny olona toy ny any Sina, Rosia ary India, ka nahatonga ny tsy fahampian’ny dibera nafarana.
2. Ankoatra izany, roa taona nifanesy i Aostralia no niaina ny Tsy Fisiana Lehibe. Tsy vitan'ny hoe niakatra ny vidin-tsakafo fa voakasika ihany koa ny habetsahan'ny dibera nahondrana.
3. Araka ny nosoratako tao amin'ny diariko teo aloha, tsy ampy ny fizarana ronono noho ny tsy fisiany, izay no toejavatra iainan'ny ao an-toerana.
Ary koa, satria amin’ny fotoana amokarana dibera no ahazoana ronono voasodika, raha tsy lafo ny vovo-dronono dia miandrona ao fotsiny ka lasa tahiry, ary miteraka toe-javatra tsy ahafahana mampitombo ny habetsahan’ny dibera vokarina indray mandeha izany.
Ohatra : ny zavatra toy ny kafe amin’ny kanety tsaratsara kokoa raha ampiana ronono velona fa tsy ronono voasodika, ka ampiasaina amin’izay antony izay ny ronono velona noho izany, ary mampitombo ny tsy fisiany izany.
Na izany na tsy izany, raha tsy misy fepetra lehibe raisina ampitovian-danja ny tolotra sy ny tinady amin’ny vokatra avy amin'ny ronono amin'ny sehatra nasionaly, manahy aho fa hiverimberina foana io tsy fahampian’ny dibera io. Ampahany amin'ny olana momba ny “fahaleovantena ara-tsakafo” ny resaka rehetra momba ny dibera.